Makaô: Ireo Fihobiana Masiatsiaka Mandritra Ny Matson’ny Fanilo Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2018 6:40 GMT
Sary avy amin'ny flickr an'i Tori birdie
Tsy toy ny tany amin'ireo firenena hafa nolalovany, tsiky fotsiny no azon'ny Fanilo Olaimpika androany tao Makaô, ny dingany farany mialoha an'i Shina Tanibe. Efa nahavita nitondra ny Fanilo manerana ny tanàna tsy nisy mpanakantsakana ireo mpihazakazaka. Mifanohitra amin'izay kosa, tamin'ny alalan'ny fanofahofana ireo saina dia tena notehafan'ireo mpijery ilay izy, mpitazana izay zara raha nahafehy ny fientenentanan-dry zareo arakaraky ny nitetezan'ilay fanilo an'ity zanatany Portiogey teo aloha ity, naverina ho ambany fifehezan'ny Shnoa tamin'ny taona 1999. Manao tatitra feno i Leocardo [pt] fa:
Ny maraina tokony ho tamin'ny 3ora sy 44 minitra teo, raha natolotry ny Filoha Mpanatanteraka Edmund Hotoa ny fanilo Olaimpika ho amin'i Leong Hong Man, mpihazakazaka voalohany, atleta mpiangaly Wushu no nitondra voalohany ny fanilo nankao Makaô. Teo amoron-tseranana Doca dos Pescadores’ hatrany, nomeny an'i Stanley Ho, ilay mpanankarena io, izay na nahavita ireo dingana vitsivitsy aza, dia nahavita nanaporofo fa niomana tsara mihitsy ary tena feno fitiavan-tanindrazana, ary niteny fa noho ny amin'ny fireneny entiny ny fanilo “ho an'ny amin'ny faran'ny tany.”
Sary avy amin'i flickr an'i Tori birdie
Anisany tamin'ireo olo-malaza nasaina hitondra ny fanilo, nisongadina indrindra ry Costa Antunes, ny talen'ny Biraon'ny Fizahantany, Jorge Neto Valente, filohan'ny Fikambanan'ny Mpisolovava ao Makaô, na Paula Carion, atleta mpanao judo efa nahazo loka tamin'ireo Lalao Aziatika farany. Ilay mpihira avy any Hong Kong, Miriam Yeung, izay fototry ny resabe nahatonga ny fanilihana an'i M. José Pereira Coutinho, dia nampiasa ny 30 segondrany mba hihorahana ny “yeah! yeah!” rehefa nanetsiketsika ny totohondriny havia.
Sary avy amin'i flickr an'i H.L.Tam
Fandre andavanandro izany. Nihomehy ny rehetra mba ho tsara rehefa ao anaty sary ary nanofahofa ny veloma veloma rehefa nitazona ny fanilo. Ny tena endrika matotra dia ny an'i Leong Heng Teng, izay nitondra ny fanilo nankany amin'ny moron-tseranan'i Doca dos Pescadores ary namarana ilay hazakazaka nifampitohy tao Makaô. Noho ireo fahataràna sasantsasany “amin'ny fomba Pôrtiogey” (lova ara-kolotsaina ve?), tsy nandalo velively ny tranoben'ny Leal senado (Loyal Senate) ny fanilo. Tsy fantatra ireo mpivarotra teo amin'ny Avenue Almeida Ribeiro raha hitaraina ny lafy ratsiny tamin'ireo raharaha amin'ity indray mitoraka ity (tsy ratsy saina aho, moa tsy izany ve?) nidika fa tsy nandalo namakivaky ilay lalamben'ny renivohitra ilay fanilo.
Sary avy amin'i flickr-n'i H.L.Tam
An'arivony maro ireo mponina no nidina an-dalambe, nanaraka an'ireo mpizahatany, maro tamin'izy ireo no avy any amin'ny Tanibe Shina. Ny vahoaka – eny fa na ireo Tandrefana aza – dia toa samy manaiky avy hatrany ny hevitra hoe tokoy ho eny amin'ny toerana azy ireo manokana no atao ny fangatahan'ireo mpanao fihetsiketsehana ary, araka izany, lavitry ny hetsika manodidina ny Afo Olaimpika. Andiana Filipiana kristianina (Jesus Rocks?) no nanatevin-daharana ny lanonana mba “hitso-drano ireo Lalao”, araka ny voalazan'izy ireo.
Sambany teo amin'ny tantara no nandalo an'i Makaô ny Fanilo Olaimpika, ary angamba ho ny farany farafaharatsiny tao anatin'ireo taona marobe. Nizotra ampilaminana ny fampitàna fanilo ary tsy nisy fanohintohinana tahàka izay nitranga tamin'ny fitondrana an-tongotra ny fanilo olaimpika tany an-kafa, izay mitondra anay hanontany tena mikasika ilay fitaovana fiambenana goavambe napetraka tao an-toerana. Raha ny fahitana azy, tsy tao anaty fandaharampotoana mikasika ireo mpanohana ny tolona Tibetàna i Makaô, ary ireo nijanona tany an-tranony nijery tamin'ny fahitalavitra ireo mpikatroka mpanao ariary zato am-pandriana.
Ankehitriny, tafaverina ao amin'ny Tanibe Shina ny fanilo, toerana izay hitohizan'ny fifamindrana mankany Beijing ho an'ireo Lalao Olaimpika ny 8-24 Aogositra.